आजको राशिफलःबि.स.२०७६ साल मंसिर १५ गते आईतबार इश्वी सन २०१९ डिसेम्बर १ तारीख.. – पुरा पढ्नुहोस्……
आज श्री शाके १९४१ बि.स.२०७६ साल मंसिर १५ गते आईतबार इश्वी सन २०१९ डिसेम्बर १ तारीख मार्गशीर्ष शुक्लपक्ष पञ्चमी तिथी उत्तराषाढा नक्षत्र वृद्धि योग वालव करण चन्द्रमा मकर राशिमा आनन्दादि योगमा मुसल योग परिधावीनाम संवत्सर सुर्य दक्षिणायन हेमन्त ऋतु राम जानकी विवाह पञ्चमी, जनकपुरमा विवाह पञ्चमी मेला, आबाल ब्रह्मचारी षडानन्द जयन्ती, विश्व एड्स रोग दिवस –
मेष राशि – चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ – सामाजीक कार्यका क्षेत्रमा सहभागीता जनाउने अवसर प्राप्त रहनेछ । परीश्रम अनु?पको फल प्राप्ती हुने समय रहेकोछ ।सभासम्मेलन जन्य कार्यका क्षेत्रमा मान सम्मान प्राप्तीको योग रहेकोछ । मनोरञ्जनका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहेनछ । पारीवारिक झोर झमेलाको सामना गर्नु पर्ने समय रहेकोछ ।
बृष राशि – इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो – पारीवारीक मनोरञ्जनको निम्ति धेरै समय ब्यतित हुन सक्छ । कार्य सम्पादनमा ढीलाई हुनाले सामान्य अप्जस सहनु पर्ला । परिवारको मार्गदशर्न नमान्दा कार्यको क्षेत्रमा अपजस खेप्नु पर्नेछ । नयाँ मित्रह? सगँ को भेट घाटमा सामान्य यात्रा तथा खर्च हुनसक्ने सम्भाबना रहेको छ ।
मिथुन राशि – का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह – शारीरिक आलस्यातले गर्दा गरीरहेको काम को क्षेत्रमा अपजस सहनु पर्ला ।सोचेको भन्दा बढिमात्रामा खर्च हुनाले मानसिक चिन्ता उत्पन्न हुनेछ । आम्दानि मध्यम रहेता पनि बोलिको कारण साधारण दुर्घटनाको सम्भाबना रहेको छ । नजिकका ब्यक्तिह?को साथ छुट्नाले सहकार्यमा झन्झट ब्यर्होनु पर्नेछ ।
सिंह राशि मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे – स्वास्थ सम्बन्धि समस्याले सताउन सक्छ बिशेष ध्यान दिनु होला । मनमा चन्चलताले बास गर्नाले सहि निर्णय गर्न नसकीएला । शुभ चिन्तकको बृद्यि हुनाले मनमा उत्साह बढ्नेछ । परोपकारको क्षेत्रमा समय र धन खर्चनु पर्ने समय रहेको छ । यात्रामा एक्लोपनको महसुस हुनसक्ला ।
कन्या राशि – टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो – आय आर्जनमा बृद्यि गर्नका लागि तपाईले बढी परीश्रम गर्नु पर्न सक्छ । बौधिक क्षेत्रको बिकाशले तपाईको मान सम्मानमा बृद्यि गर्नेछ । आफु भन्दा सानाको सहयोगमा गरिएको कार्यह? सफल रहनेछन । बौधिक ब्यक्तित्व सगँको सामिप्यता आगामी दिनलाई मार्गदर्शन बन्नेछ ।
तुला राशि – र, रि, रे, रो, ता, ति, तु, ते – पारीबारिक मनोरञ्जनका निम्ती धेरै समय र पैसा खर्चनु पर्नेछ । आफन्तजनको साथ सहयोगमा कमि आउनाले सामान्य मानसिक चिन्ताले सताउन सक्छ । सामान्य कठिनाई पश्चात मनग्य आम्दानीका स्रोतह? फेला पर्नाले मन उत्साहित रहनेछ । पारीवारिक झोरझमेलाको फन्दामा परिनाले दिन निरासा पुर्ण रहला ।
धनु राशि – ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे – आफन्तजन बिचको भेटघाटले मन प्रशन्न रहला । मित्रह?को साथ सहयोग बाट बिग्रन लागेको काममा सफलता प्राप्त हुनेछ । स्वास्थमा आएको खराबिले कार्यमा ढिलाई उत्पन्न गराउनेछ । सामान्य बादबिबादको चक्करकाट्नु पर्नेछ । अ?को अनुशरणले तपाईलाई समान्य झन्झट वा अपजस दिलाउन सक्नेछ ।
मकर राशि – भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि – परीवारका कोहि सदस्यह?को स्वास्थमा खराबी आउन सक्नेछ । मान प्रतिष्ठामा बृद्यि हुने योग रहेको छ । मनमा आट र शाहस को कमिले कार्य सम्पादनमा झन्झट ब्यहोर्नु पर्ला । जिबन साथीको सहयोगले ब्यापार ब्यवसायमा सुधार आउनेछ । सहि निर्णय हुन नसक्दा परिबारीक कलहको सामाना गनुपर्नेछ ।
कुम्भ राशि – गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द – शत्? सबल रहनाले कुराकाट्ने ब्यक्तिह?को बृद्धि हुनेछ । सामान्य आर्थिक अभाब झेल्नु पर्ला । मनोबिलासिताका सामानह?मा सामान्य खर्चहुन सक्ने सम्भाबना रहेको छ । अनावश्यक खर्च नियन्त्ररण गर्न गारो हुन सक्ला । आफ्नु प्रिय ब्यक्ति सगँको बियोगले मन नि?त्साहित रहला ।
मिन राशि – दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि – यात्रा फाईदा मुलक हुनसक्ने सम्भाबना रहेको छ । आय आर्जनको लागी राम्रो समय रहेता पनि सामान्य खर्च हुन सक्छ । नयाँ मित्र सगँको भेट वा प्रिय खबरले मन प्रशन्न रहनेछ । आम्दानी बृद्यिका लागी बीद्योत ब्यक्तित्वह?को मार्गदर्शन अबलंबन गर्नु लाभदाइक रहला । आय आम्दानिका क्षेत्रमा जुट्ने समय रहेकोछ ।– ज्यो.प. सरोज घिमिरे
Prevयी चार ठा’उँमा नेकपा वि’जयी … हेर्नुहोस्
Nextनेकपाकी विद्या भट्टराई कास्की- २ मा अगाडि यस्तो छ मत परिणाम..
बखतका मित भेटीए पुर्वमा, बखत भन्दा साना र प्रतिभा भन्दा ठूली फेसबुकले जुराएकाे यस्तो जाेडी-हेर्नुहोस (भिडियो सहित)
अभियन्ता केपी खनालले बनाए बाजुरामा अनाथको लागि बालगृह -हेर्नुहोस ( भिडियो सहित )
सागर आलेको रेस्टुरेन्ट पुग्दा जे देखियो-हेर्नुहोस (भिडियो सहित)